Ny rôma Android Android 11 tsara indrindra hilalao kilasika | Androidsis
Ny fomba tsara indrindra ahafahana mampatsiahy ireo lalao nankafizinay rehefa nanjary nalaza ny konsole ary nanomboka nahatratra trano maro dia amin'ny alàlan'ny emulator, emulator azo ampiasaina amin'ny sehatra rehetra eny an-tsena, ao anatin'izany ny Android.
Ny mankafy lalao retro dia mahazo aina kokoa amin'ny solosaina, na izany aza, tsy ny olon-drehetra no afaka manao izany. Ho fanampin'izay, satria mitondra antsika hatrany ny finday avo lenta misy antsika mora kokoa ny mankafy lalao Retro avy amin'ny finday avo lenta.
Raha te hahafantatra ny inona ianao roma Retro tsara indrindra ho an'ny AndroidManasa anao aho hamaky hatrany mba hahitana emulator console ho an'i Sega, Nintendo ary Sony indrindra, satria izy ireo no mpanamboatra nandoka ity rafitra fialamboly ity hatry ny ela.
Mandeha tsy ilazana fa misy ireo emulateur misy Android na sehatra hafa tsy mampiditra rom, satria raha tsy izany dia tsy ho hita ao amin'ny Play Store izy ireo, farafaharatsiny amin'ny tranga Android.
Amin'io lafiny io, Google dia mahery setra kokoa noho Apple, hatramin'ny farany tsy mamela ny emulateur ho hita ao amin'ny App Store.
1 Emulator Console ho an'ny Android
2 Emulator PlayStation ho an'ny Android
3 Sega Emulator ho an'ny Android
3.1 Nostalgia. GG Emulator
4 Nintendo emulator ho an'ny Android
4.1 Emperoran'ny feso
4.2 Citra Emulator
Emulator Console ho an'ny Android
Raha mitady emulator ianao mifanaraka amin'ny tsirairay amin'ny konsol izay tonga teny amin'ny tsena dia mitady RetroArch ianao, fampiharana izay azontsika ampiana ireo cores (emulator) ilainay amin'ny fotoana rehetra, satria raha ny tena izy dia tsy misy. Na dia toa somary manahirana aza izany amin'ny voalohany dia vantany vao azonao ilay izy dia io no iray amin'ireo tsara indrindra, raha tsy ny tsara indrindra.
Raha te hanahaka ny konsole samihafa amin'ny findainao ianao dia ity ilay rindranasa tadiavinao, fampiharana azonao ampiasaina ihany koa ho anao misintona maimaim-poana, tsy misy doka na karazana fividianana fampiharana. Toy ny hoe tsy ampy izany, dia multiplatform izy io, amin'izay azonao ampiasaina amin'ny solosaina tantanan'ny Windows, macOS, Linux ...
Ny emulator Classic Boy Gold dia manome emulator antsika izay manohana azy NES, Game Boy, Sega Genesis, Saturn, PlayStation Original, Nintendo 64 eo amin'ny maro. Io dia ahafahantsika mamonjy ny satan'ireo lalao, mifanaraka amin'ny fanaraha-maso Bluetooth sy amin'ny fihetsika amin'ny efijery.
Classic Boy Gold dia miaraka amin'i RetroArch, ny emulator cross-platform tsara indrindra misy ho an'ny Android. Azo alaina maimaimpoana ho maimaim-poana tanteraka ny rindranasa, tsy misy doka izany fa raha mividy ao anaty ny rindranasa ianao hamaha ny safidy rehetra atolotray antsika.
ClassicBoy Gold - Emulator lalao video retro
Emulator PlayStation ho an'ny Android
Raha te hankafy ianao romana playstation ny emulator tadiavinao dia ny ePSXe, emulator mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny roms, ahafahan'ny mpilalao roa milalao miaraka amin'ny smartphone amin'ny alàlan'ny knobs control.
Ity emulator ity, toa ny RetroArch, dia azo alaina ao amin'ny PC ihany koa aloa ny kinova Android (Manana vidiny 2,99 euro izy) tsy ny kinova ho an'ny PC fa raha azo sintomina maimaim-poana.
Emulator mahaliana iray hafa izay mamela antsika hankafy ROM psp dia PPSSPP, emulator izay miavaka amin'ny maha iray amin'ireo milamina indrindra eny an-tsena, manolotra fanampiana ho an'ny romana marobe, mamela antsika hitahiry sy hanohy ny lalao any aoriana, mifanaraka amin'ny bokotra fanaraha-maso ...
Ity emulator ity misy amin'ny kinova roa. Amin'ny lafiny iray, hitantsika ny kinova maimaim-poana miaraka amin'ny doka izay tsy manome antsika fidirana amin'ireo fiasa rehetra. Ary etsy ankilany, hitantsika ny kinova karama, izay ny vidiny dia 4,69 euro ary manala ny doka rehetra ary manome antsika fidirana amin'ireo asan'ny fampiharana rehetra.
Developer: Henrik RydgÃ ¥ rd
Iray amin'ireo emulateur izay manome safidy betsaka sy safidy betsaka indrindra raha ny momba azy alao tahaka ny lalao PlayStation dia FPse, emulator ahafahantsika mametraka takelaka maromaro isan-tsegondra, manitsy ny fahombiazan'ny herin'ny processeur ...
Izy io dia mifanaraka amin'ny mpanara-maso amin'ny alàlan'ny Bluetooth. FPse dia tsy manome anay kinova maimaimpoana, Ka raha te hampiasa azy hilalaovana ROM ankafizintsika isika dia tsy maintsy mamaky ilay boaty ary mandoa ny 3,39 euro vidiny.
Sega Emulator ho an'ny Android
Nostalgia. GG Emulator
La Lalao Gear io no loko voalohany nandona ny tsena ary lasa fahombiazana be. Raha te-hahatadidy ireo lohateny izay natomboka ho an'ity console ity ianao dia azonao atao izany noho ny fampiharana Nostalgia Emulator, emulator ahafahantsika mitahiry ny lalao ataontsika, mifanaraka amin'ny mpanara-maso ary misy amina kinova roa: maimaim-poana ny iray ary iray nandoa izay Misy vidiny 1,39 euro.
Developer: Emulators nostalgia
Ny iray amin'ireo console izay azontsika alaina tahaka amin'ny fitaovana Android dia ny Dreamcast, rindranasa natao ho an'ny finday avo lenta, satria tsy mila processeur 2-core sy RAM 512 MB fotsiny. Ity fampiharana ity dia safidy tsara kokoa noho ny redream amin'ny fitaovana taloha.
Reicast dia misy ho anao misintona maimaim-poana, tsy misy doka na karazana fividianana rindrambaiko hafa.
Reicast - emulator Dreamcast
Raha maoderina antonony ny smartphone-nao ary tianao ny hankafizanao ny lalao Dreamcast, azonao atao mora foana amin'ny alàlan'ny redream, fampiharana natao ho an'ny smartphone mahery vaika. Izy io dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny lohateny izay natomboka teny an-tsena ary azo alaina ho anao misintona maimaim-poana, ampidiro ny doka sy ny fividianana rindrambaiko hanalana azy ireo.
Nintendo emulator ho an'ny Android
Raha miresaka momba ny emulator Nintendo isika dia mila miresaka momba ny Dolphin, emulator izay ahafahantsika mankafy ny ankamaroan'ny lohateny izay nahatratra ny tsena ho an'ny roa tonta Lalao Cube raha ny Wii. Ny iray amin'ireo tanjak'ity fampiharana ity dia ny fisintomana maimaim-poana, tsy misy doka ary tsy misy karazana fividianana hafa ao anatin'ny fampiharana
Developer: Emperoran'ny feso
Raha te hankafy ny anaram-boninahitra nahatonga azy tamin'ny Nintendo 3DS Azonao atao ny manao azy mora foana ary maimaim-poana noho ny Citra Emulator, emulator mifanaraka amin'ny mpanara-maso ary ahafahantsika mitahiry ny fivoaran'ny lalao hitohy rehefa vitantsika izany.
EmuBox dia mamela antsika hankafy ny ankamaroan'ny console izay natombok'ilay mpanamboatra Japoney Nintendo eny an-tsena, toy ny Nintendo DS, SNES, Game Boy Advance, NES… Izy io dia ahitana toetra mitovy amin'ny ambin'ny emulator mamela antsika hampiasa bokotra fanaraha-maso, asa haingana, hamonjy ny fizotry ny lalao….
EmuBox dia natao hanolorana ny fahombiazana tsara indrindra amin'ny terminal antonony sy ambany, azo ampiasaina ho anao izy io misintona maimaim-poana, misy doka fa tsy misy fividianana fampiharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny rôma Android Android 11 tsara indrindra hilalao kilasika
Ny fampiharana rindrambaiko mangarahara tsara indrindra ho an'ny Android